Afhayeenka Howlagada Al-shabaab oo shegay in Goobaale uu Ahaa Mas’uul aad Ugu Muhiimsanaa Dowladda Somaliya
Xarakada Al-shabaab ayaa Faah-faahin dheeraad ah ka bixiysay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay lagu dilay Taliyihii Guutada 3-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Rooble Jimcaale (Goobaale).
Afhayeenka Dhanka Howlgalada Al-shabaab, C/casiis Abuu Muscab, oo la Hadlay warbaahinta Taageerta Al-shabaab ayaa ka hadlay sababaha ay u fuliyeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay Taliyihii Guutada 3-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Maxamed Rooble Jimcaale (Goobaale) iyo qaar kamid ahaa ilaaladiisa.
C/casiis Abuu Muscab Afhayeenka Dhanka Howlgalada Al-shabaab ayaa wuxuu sheegay in Sarkaalkaasi uu ku caanbaxay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab, isagoo intaa ku daray in cadaawad dheeraad ihi uu u muujin jiray.
“Sida la wada ogyahay ninkaasi wuxuu ahaa xubin muhiima oo Ciidamada Dowladda ka tirsan. Wixii uu ku caanbaxay oo aadka loogu gartana waxaa ka mid ahayd inuu aad iyo aad uu Mujaahidiinta dagaalkoodu ugu heelanaa, marwalbana uu cadaawad sidaayo ah uu u muujinaayay.” C/casiis Abuu Muscab uu yiri.
“Ninkaasi dagaalo badan buu ka qaybgalay oo ka kala dhacay Xamar, Gobolada Shabellaha Hoose, Shabellaha Dhexe iyo Gobolada Dhexe. Guud ahaan ninkaasi wuxuu ahaa nin aad iyo aad dagaalkiisa ugu hagar baxay la dagaalanka Mujaahidiinta.”